နေအိမ် / Archives for Arbitration Cost
24/06/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
စာချုပ်တစ်ခု ICC ကအနုညာတစီရင်အပိုဒ်အပါအဝင် by, အဆိုပါပါတီများကိုသူတို့အငြင်းပွားမှုခုံသမာဓိများကဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုအနုညာတစီရင်၏ ICC ကစည်းကမ်းများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအားဖြင့်အုပ်ချုပ်မည်ပါလိမ့်မည်သဘောတူ, ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံမှာမဆိုမဖြစ်မနေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပြင်. ဤသည်ကိုလည်းကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုဆိုလို […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ICC ကအနုညာတစီရင်
Metal VM က J.S. V ကို. JANINA (ARB / 01/11) - Awards
05/06/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
သတ္တု VM က J.S အတွက်ခုံသမာဓိဆု. v. Janina စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကိုဆိုဗိုကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင်တရားရုံးကပြန်ဆိုခံရဖို့ပထမဦးဆုံးချီးမြှင့်ခဲ့. ဤသည်ခုံသမာဓိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အရောင်းစာချုပ်ထဲကပေါ်ထွက်လာသောအငြင်းပွားမှုသက်ဆိုင်ရာ 2009 သတ္တု VM ကများအကြား (တစ်ဦးဆားဗီးကော်ပိုရေးရှင်း) နှင့် Janina (တစ်ဦးကိုဆိုဗိုကော်ပိုရေးရှင်း) မှလျှပ်စစ်ဘွိုင်လာနှင့် ပတ်သက်. […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, ကိုဆိုဗိုအနုညာတစီရင်, ဆားဘီးယားအနုညာတစီရင်
ပထမဦးစွာ-အဆင့်အကြံပြုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ခိုင်မြဲသောအမျှအဆင့် Aceris ဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဖက်ရှင်စတိုး
18/04/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
Aceris ဥပဒေတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်ထားပြီး, များအတွက်ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ချုပ်ထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိမြဲမြံစွာအကြံပြု 2017. အကြံပြုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိကုမ္ပဏီများ၏အဆင့်ကိုအောက်တွင်ပြသထားပါသည်. Aceris ဥပဒေအလားတူအတွက်အကြံပြုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိကုမ္ပဏီတခုအဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် 2015-2016, ထိုသို့ကြိုတင် DK AARPI မှပယ် spinning ဖို့အလွန်အမင်း-မှတ်ခဲ့သည်. အဆိုပါခေါင်းဆောင်ရဲ့ […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, HKIAC အနုညာတစီရင်, ICC ကအနုညာတစီရင်, ICDR အနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, LCIA အနုညာတစီရင်, အလုပ်အကိုင်, PCA အနုညာတစီရင်, SCC အနုညာတစီရင်, SIAC အနုညာတစီရင်, UNCITRAL အနုညာတစီရင်, WIPO အနုညာတစီရင်
28/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်, အတော်ကြာခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားခုံသမာဓိ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကြာချိန်နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏အနှစ်ချုပ်များဖြန့်ချိခဲ့ကြ. ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်၏လန်ဒန်တရားရုံးတို့ပါဝင်သည် ("LCIA") (ကနေဒေတာတွေကို3နိုဝင်ဘာလ 2015), စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစတော့ဟုမ်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင် Institute က ("SCC") (ကနေဒေတာတွေကို 24 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016) နှင့်စင်္ကာပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ဟောင်ကောင်အနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန